हिरासतभित्र प्रियङ्काको हत्या कि आत्महत्या ? आयोगले थाल्यो अनुसन्धान « News24 : Premium News Channel
हिरासतभित्र प्रियङ्काको हत्या कि आत्महत्या ? आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
आयोगको टोलीले सोमबार घटनाबारे मृत शरिर, इलाका प्रहरी कार्यालय विष्णुपुर कार्यालयको हिरासत अनुगमन गरेको छ । हिरासत अनुगमन पछि आयोगको अधिकृतले सोमबार प्रहरी नायब निरीक्षक यादवलाई वयान दिनभन्दा सोमबारसमेत बयान दिन मानेनन् । उनले मानवअधिकार अधिकृत समक्ष कुनै पनि हालतमा लिखित बयान नदिने अडान मै बसे । प्रहरी नायब निरीक्षक शिब नारायण यादवले आफ्नै कार्यालय भित्र भएको घटनाबारे नया पत्रिकालाई समेत बताउन चाहेनन् । नयाँ पत्रिकाबाट